Mpandova ny tsy fahafatesana
Création : 27 septembre 2014
"Mba hohamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay." - Tit. 3:7.
Hahazo valiny ny fiezahana rehetra atao am-pikirizana hitady fahasoavany sy hery (...) Angataho Andriamanitra hanome anao ireny zavatra tsy hainao atao ireny. Lazao amin'i Jesôsy ny zavatra rehetra. Aborahy eo Aminy ny tsiambaratelo ao am-ponao; fa ny masony no mahay mitady ny zavatra mitoby mangingina ao anatin'ny fanahy, ary hainy ny mamaky ny eritreritrao, toy ny mamaky boky mivelatra. Rehefa avy nangataka ny zavatra ilaina hitondra soa ho an'ny fanahinao ianao, dia manàna finoana fa ho azonao sy horaisinao tokoa izany. Ekeo amin'ny fonao manontolo ny fanomezana avy aminy, satria Jesôsy efa maty mba hanananao, ny zavatra sarobidy any an-danitra tahaka anao.
Aoka ny tanora tsy hihevitra velively fa afaka mandroso amin' ny fiainana malalaka sy feno fampanaranam-po ny tena izy, ka tsy mba hikasa hiomana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra,kanefa mieritreritra ny hijoro amin'ny fahamarinana any amin'ny andro fitsarana. Mila manao ezaka fatratra izy hanao, izay hanehoana eo amin'ny fiainany ny fiainana lavorary hita taratra teo amin'ny Mpamonjy, koa raha ho avy Kristy, dia ho vonona izy hiditra eo am-bava-hadin'ny Tanànan'Andriamanitra. Ny fitiavan’Andnamamtra mitafotafo sy ny fitoerany ao am-po no hitondra hery hahaizana mifehy
tena sy mamolavola ary mambo¬atra ny toe-tsaina mbamin'ny toetra amam-panahy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy no hibaiko ny tanjona sy ny fikasana ary ny fahafahana ho amin'ny fantsona izay hitondra hery ara-panahy sy ara-tsaina - hery izay tsy tokony havelan'ny tanora eto amin'ity tontolo ity, fa hery izay azony entiny ho an'ny amin'ny fiainana ho avy ka hohazoniny mandritra ny mandrakizay.
Ny lanitra manontolo no liana amin'ny lehilahy sy vehivavy izay nomen'Andriamanitra tombam-bidy lehibe tokoa ka namoizany ny Zananilahy ho faty hatavotra azy. Tsy misy voaary hafa noforonin' Andriamanitra ka afaka mihamivoatra, mihamadio ary mihamisandratra tahaka ny olombelona. Kanefa rehefa donton'ny filany manimba ny olombelona, ka milomano ao anaty fahavetavetana, inona indray no voaary azo andrandraina afaka haneho an'Andriamanitra! Tsy mahavita manao izay tiany hahatongavana sy tiany ho amin'ny tenany ny olombelona. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra no hananany fitomboana ara-tsaina lalandava. Aoka hiposaka ao an-tsainy ny fahazavan'ny fahamarinana, dia ho tondraky ny fitiavana an'Andriamanitra ny fony ary [...]